Wings Over Flanders Field "Eo anelanelan'ny lanitra sy ny helo II" Vaovao farany
Fampidinana: 7,072 alaina 966,838 fotoana.
Ny ekipa ao ambadiky ny Wings Over Flanders Field dia nampiseho sary kely fanampiny misy ny "Eo anelanelan'ny lanitra sy ny helo II", ny kinova lehibe manaraka amin'ilay sim:
Wings Over Flanders Fields: Salama daholo, Ity misy sary nalaina avy amin'ny BH&H II ho avy. Sary voalohany nalaina nandritra ny fiofanana tany Angletera, ary ny sary faharoa tiako fotsiny ny fomba tsy ahitàna ny tany tsara tarehy ankehitriny tsy hitan'ny rahona ary ny SE5a Viper dia toa tsara.
WWI no nitondra ny fiandohan'ny fiaramanidina mpiady - efa mba nanontany tena ve ianao hoe nanao ahoana ny fiainana ho an'ny Ady lehibe iray Airman nanidina ireo marainan'ny fiaramanidina mampidi-doza tamin'ny sidina voalohany? Te hiaina ny tahotra, ny fientanam-po ary ny ady mafy hahazoana ny fahavelomana amin'ny PC-nao ve ianao .. .. Aza mitady lavitra intsony Wings Over Flanders Fields - ilay WWI lalina indrindra simulator sidina .